Kutheni iMedium.com ibalulekile kwisiCwangciso sakho seNtengiso | Martech Zone
Kutheni iMedium.com ibalulekile kwisiCwangciso sakho seNtengiso
NgoMvulo, Oktobha 7, 2013 NgoLwesithathu, uDisemba 17, 2014 ULarry Alton
Ezona zixhobo zibalaseleyo zentengiso ekwi-Intanethi zihlala zitshintsha. Ukuze uhambisane namaxesha, kufuneka ugcine indlebe yakho emhlabeni, ukuze uthathe ezona zixhobo zintsha kunye nezona zisebenzayo zokwakha abaphulaphuli kunye nokuguqulwa kwezithuthi.
Izicwangciso zokubloga ze-SEO zigxininisa ukubaluleka komxholo "womnqwazi omhlophe" kunye nokwabelana, ukuze ukwazi ukusebenzisa iiblogi zeshishini, iwebhusayithi enegunya, kunye ne-Twitter ukwakha igama lakho ledijithali. Inkqubo yewebhu ekuPhakathi ngoku ivelisa i-buzz engummangaliso kuba inako ukuzisa iintlobo ezifanelekileyo zabaphulaphuli kwipotifoliyo yakho ekwi-intanethi.
Yintoni ephakathi ukuya phezulu?
Insiza yewebhu yasimahla ye-Medium.com intsha kwindawo leyo, ivele bukhoma kwiwebhu ngoJulayi ka-2012 emva kokufumana ukuxhaswa kwi-Twitter. Ephakathi yindawo eqhutywa ngumxholo, iwebhusayithi encinci edibanisa abaphulaphuli namanqaku afanelekileyo kwaye aluncedo kubomi babo.
Ungeniso lwebhlog kunye namanqaku athunyelwe kuPhakathi ngamaxwebhu aphilayo, ngenkqubo yokuphawula evumayo evumela abafundi ukuba baqaqambise amanqaku aphambili kwaye bongeze izimvo zomda. Zama ukuthelekelela uhlobo oluhle lweMicrosoft Word's "Track Changes" kwaye uyiloo unayo.
Amagqabantshintshi ongezwe kwinqaku lakho ayimfihlo de uphinde uwaqwalasele kwaye uphawule amagqabantshintshi ukuba abonwe luluntu. Oku kunokuba yindlela efanelekileyo yokuqhuba ingxoxo ebalulekileyo.
Ngelixa Medium isese-beta, unokufumana ukuqala kwentloko ngokusayinela iakhawunti yasimahla usebenzisa ukungena ngemvume kwe-Twitter yenkampani yakho. Kulungile: yonke into iqhutywa yi-Twitter kwi-Medium.
Izithuba zakho ziya kubotshelelwa kwisiphatho sakho se-Twitter, zisenza ukuba kube lula ebantwini ukuba balandele ubukho bakho ekuhlaleni. Abasebenzisi abaphakathi abonwabela iposti yakho banokucofa iqhosha elithi "Cebisa", eliza kunceda ukuyinyusa kwizinga le-Medium.com.
Abafundi banokwabelana ngokulula ngezithuba zakho kwi-Twitter okanye kwi-Facebook feed. Amagqabantshintshi abotshelelwe kwizibambo zabo ze-Twitter, ukuze ukwazi ukulandelela ngokulula abalandeli kwaye ubongeze kwinethiwekhi yemithombo yeendaba.
Xa abantu bebhala nge-Medium, bahlala bejonga isixhobo se-metric. Nangona kunjalo, kulula ukuyisebenzisa amanani kunye neegrafu ingabandakanywa ngokulula kwingxelo yakho yemihla ngemihla.
Nje ukuba iakhawunti yakho yamkelwe, ungandwendwela eyona menyu kwaye ucofe ku "Izibalo." Apha unokufumana inkqubo yokutshata ethi ifake izimvo zakho zizonke, ezona zifundo kunye neengcebiso zenyanga ephelileyo.
Isilinganiselo sokufunda sikunika ipesenti yokuba bangaphi abantu abakrola kumxholo wakho ukuze bawubone, ngokuchasene nokucofa nje kwinqaku. Esi sikrini sokuqala sikunika umbono opheleleyo wazo zonke izithuba zakho.
Ukuba ungathanda ukusondeza ngaphakathi kwaye ubone amanani ezithuba zakho ezizodwa, cofa nje kwisihloko senqaku. Igrafu iya kuzihlengahlengisa ngokuzenzekelayo ukubonisa iimetrikhi zakho zendlela kwinqaku elinye.
Iithebhu "ezifundwayo" kunye ne "Recs" nazo zinokucofa, ukuvelisa igrafu ebonakalayo nganye yezi ndidi. Ukuba ubuyela kwimenyu ephambili, unokujonga umsebenzi wezithuba zakho. Ukucofa kweli candelo kuya kukubonisa uluhlu lokuba ngubani ocebise okanye ophawuleyo kwizithuba zakho, ukuze ukwazi ukunxibelelana nazo kamva.
Okwangoku, abasebenzisi mabamenywe liqela labahleli beMedium.com ukuqala ukupapasha kwiwebhusayithi. Ungabhalisela ngokulula iakhawunti yoMfundi kwaye ungene kuluhlu lokuvunywa komhleli. Sebenzisa ixesha lokulinda ukukhangela abanye ababhali ngaphakathi kwe-niche yakho, uphawule ngezithuba ezinxulumene noko, kwaye uphakamise ukubonakala kwenkampani yakho.
Nje ukuba ufumane ubungqina kuMedium.com, ungaqala ukuyila kunye nenkqubo yokupapasha. Inkqubo yokuyila iyasebenzisana nayo. Ephakathi ikuvumela ukuba wabelane ngeedrafti eziqhubekayo namanye amalungu, anokubeka izimvo kunye negalelo kwimveliso yakho egqityiweyo.
tags: CMSInkqubo yolawulo lomxholomediumUkuxoxa ngamabali
ULarry ngumcebisi oshishino ozimeleyo ojolise kwimikhwa yemidiya yoluntu, ishishini, kunye neshishini. Mlandele kwi-Twitter nakwi-LinkedIn.
Izilayidi: Uyilo lokunxibelelana, uyilo lweIntanethi yomsebenzisi, uyilo lwamava omsebenzisi
Ukulungiswa: Umxholo, iiNdlela, ukuHanjiswa komhlaba kunye nokuGuqulwa